MIARA-MIASA AMIN'NY FINOANA NY MINO | FJKM Amboniloha
MIARA-MIASA AMIN’NY FINOANA NY MINO
Miarahaba anao amin’ny anaran’i Jesoa Ilay Tompon’ny Asa.
Indraindray dia variana manatanteraka ny asa fanompoanao amin’ny alalan’ny fanomezam-pahasoavana anananao samirery ianao. Tsara ho fantatrao anefa fa avy amin’Andriamanitra ireny fanomezam-pahasoavana ireny fa tsy tongatonga ho azy fotsiny akory. Tsy ianao irery no manana izany fa ny hafa koa dia nomen’Andriamanitra, izay mety tsy hitovy amin’izay anananao. Tsarovy fa ireo fanomezam-pahasoavana samihafa dia nataon’Andriamanitra hifameno, hiara-hiasa hampandroso ny Fiangonana izay Tenan’i Kristy (Efesiana 4, 12), hampandroso ny Asan’Andriamanitra. Misy zavatra vitsivitsy tsara ampatsiahivina eto araka izany:
Nataon’Andriamanitra hiara-miasa ny mino
Fomban’Andriamanitra ny manendry na maniraka ny mpanompony hanendry olona hafa, araka izay fepetra omeny, ho mpiara-miasa hanatanteraka ny iraka iray izay ampanaoviny. Raha velon’ ny finoana marina ianao dia tsy hoe manaiky ho mpiara-miasa amin’ny Tompo ihany fa manaiky ary vonona mandrakariva koa hiara-miasa amin’ny mino hafa izay voafidy sy voatendrin’Andriamanitra hiara-miasa aminao. Indraindray anefa dia toa tsy eken’ny sainao ny hiara- miasa amin’ny olona tsy mitovy fanomezam-pahasoavana aminao na tsy araka izay fepetra takianao ho mpiara-miasa aminao. Tsarovy fa an’Andriamanitra ny asa ary Izy no Tompony sady tompomarika ny amin’ny fahatanterahan’izany. Amin’ny fifidianana na fanendrena ny mpiara-miasa dia anjarantsika ny manaraka izay toromarika na tondrozotra na tolo-tsaina omeny hampahomby ny iraka ampanaoviny. Manome ohatra ho antsika amin’izany ny Soratra Masina. Hoy Jesoa: “Tsy hianareo no nifidy Ahy, fa Izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa, ary mba haharetan’ny vokatrareo, mba homen’ny Ray anareo izay rehetra hangatahinareo amin’ny anarako na inona na inona.” (Jaona15, 16)
Eo amin’ny fifidianana na fanendrena mpiara-miasa izany dia tsy ilaina akory fa atsaharo ny fanaovana “travail de couloir” (karazana propagandy miafina itaomana ny olona hifidy na tsy hifidy olona iray) izay fomban’olombelona ihany. Fanaon’izao tontolo izao fa tsy araka ny finoana an’Andriamanitra izany. “Aza manaraka ny fanaon’izao tontolo izao; Miovà amin’ny fanavaozana ny saina, mba hamantaranareo ny sitrapon’Andriamanitra, dia izay tsara sady ankasitrahana no marina.” (Romana 12, 2) Fantaro ny sitrapon’Andriamanitra rehefa miatrika fifidianana tomponandraikitra. Ohatra, fepetra nanendrena izay ho mpiara-miasa tamin’i MOSESY tamin’ny fitondrana ny vahoaka: olona marina sy tsy tia kolikoly, mampianatra ny vahoaka ny didy sy ny lalàna, hampahalala azy ny lalana izay mety halehany sy ny asa izay mety hataony (Eksodosy 18, 20.21). Tsarovy fa ny vokatry ny tsy fanarahana ny Tenin’Andriamanitra dia tsi-fahombiazana mandrakariva. Hita kosa anefa ny fahombiazana rehefa mifanara-tsaina sy mivelona amin’ny finoana ny tenin’ny Tompo ny mpino, na dia mety tsy hotakatry ny sainy aza izany(Lioka 5, 5-7). Entanina isika mpino samy hametraka amim-bavaka, ny fiatrehana ireny fanavaozana tomponandraikitra isan-tsokajiny eo amin’ny Fiangonana ireny. Aoka hatao amin’ny finoana hatrany ny asan’Andriamanitra.
Ireto misy ohatra vitsy avy amin’ny Soratra Masina maneho ny fiaraha-miasan’ny mpino izay tsara halain-tahaka:
– I DAVIDA mpanjaka sy ireo lohan’ny fianakaviana sy ny lehiben’ny Israely dia tsy nipetra-potsiny fa niray hina izy ireo ka nanangona izay fitaovana ilaina hoenti-mandrafitra ny Tempoly izay i Solomona no nofidin’Andriamanitra handrafitra azy aoriana. (1Tantara 29,1). Tamin’ny fony, tamin’ny heriny rehetra sy tamin’ny fahazotoana no nanoloran’izy ireo izay nananany ho amin’izany (1Tantara.29, 2.7). Tsy mifaninana na mifampialona na mifamingana fa tena miara-miasa hahatanteraka foto-drafitrasa hampandrosoana ny Fanjakan’Andriamanitra ny mino.
– Ireo efa-dahy nitondra ilay mararin’ny paralysisa; nanana finoana fa manana fahefana hahasitrana ny marariny i Jesoa. Nitady lalana hitondrana ny marary ho eo amin’i Jesoa izy ireo. Ka niray hina nampidina ny marary avy eo an-tafotrano ho eo amin’i Jesoa. Sady nomen’I Jesosy famelan-keloka no nahazo fanasitranana ny marary (Marka 2,5.11), rehefa hitan’I Jesoa ny finoan’izy ireo. (Marka 2, 5). Ahazoana valim-bavaka ny fifanekena hitondra ny olana hovahan’i Jesoa (Matio 18, 18-20).
– I PAOLY sy i BARNABASY Mpitory ny Filazantsara, olona tsara fanahy, feno ny Fanahy Masina sy finoana, tsy samy naka ho azy fa nifanatona sy niara-niasa tamin’ny Fampianarana ny Tenin’Andriamanitra ireo olona tao Antiokia. Maro be ny olona nanampy ho an’ny Tompo tamin’izany (Asan’ny Apostoly 11,25-26) Aoka isika mino hanana firaisana hatrany hampandroso ny Filazantsara (Filipiana 1,5)
Atao amin’ny Finoana ny fiaraha-miasa
Tsarovy fa manam-pahavalo io fiaraha-miasan’ny mpino io: Satàna izay mitady hampisaratsaraka ny mpino tahaka ny fikororoka vary. Fomba ampiasainy amin’izany matetika ny fampielezana fampianarana samihafa ka izay tsy miorina sy tsy mitombo amin’ny finoana dia mihilangilana sy mitambolimbolina (Efesiana 4, 11-16). Koa hamafiso àry ny fifandraisana amin’ny Tompo izay efa nilaza mazava fa hivavaka ho antsika mba tsy ho levona ny finoantsika (Lioka 22, 31.32). Aoka hitombo amin’ny finoana ary ho sahy hijoro ho vavolombelon’ny Tompo na dia hihatra amin’ny fahafatesana aza izany. Mahereza, aza matahotra, tanteraho hatrany amin’ny finoana ny Asan’Andriamanitra izay efa niantsoany sy nanirahany anao. Raha miatrika ady sarotra, dia aoka hifampahery sy hifanaiky hifamonjy amin’ny mpino namanao toa an’i JOABA sy ABISAY raha niatrika ny fahavalo izy ireo dia ny Syriana sy ny taranak’i Amona (2 Samoela 10, 11.12). “Ny firaisan-kina no hery”, “Ny mita be tsy lanin’ny mamba”, “Ny akanga maro tsy vakin’amboa”, “Mpirahalahy mianala, izaho tokiny, izy tokiko”. Ry Mpino malala, miraisa saina, miraisa hina, ampiasao ny fanomezam-pahasoavana samihafa nomen’ny Tompo hampandroso ny Fiangonany. Velomy hatrany ary aoka hivelatra eo amin’ny fiarahamonina misy anao izany. Saino hatrany hoe raha misy ny “firaisankina”: manome voninahitra an’Andriamanitra ve, mifanaraka amin’ny sitrapony ve sa araka ny fahendren’izao tontolo izao ihany izay tsy mifanaraka amin’ny sitrapon’Andriamanitra? Aoka hiray hina amin’ny finoana an’Andriamanitra irery ihany ianao. Aza miray hina na miara-miasa, na mandray anjara, na manolotra ny tenanao na ny fanananao amin’ny fanompoantsampy na fanaovana sorona amin’ny sampy izay fanompoana Satàna.
Aoka ho sahy hijoro ho maritioran’ny finoana an’Andriamanitra sy ny fahamarinany hatrany ianao ka ho mpiara-miasa amin’Andriamanitra sy amin’ny mpino namanao amin’ny finoana Azy irery ihany na inona na inona ataonao, n’aiza n’aiza misy anao ary na rahoviana na rahoviana.
HO AN’ANDRIAMANITRA IRERY NY VONINAHITRA!
Catégories :	Editorial	/ par AnjGab 18 août 2016
MIANDRY NY TOMPO NY VAVOLOMBELONA MINO
MIANDRY NY TOMPO NY VAVOLOMBELONA MINO Ry havana, Ho aminareo hatrany anie ny fiadanan’ny Tompo. Manoloana ny teny...
Editorial, Vaovao	Lire la suite
MAHERY AMIN’NY VAVAKA NY VAVOLOMBELONA MARINA
MAHERY AMIN’NY VAVAKA NY VAVOLOMBELONA MARINA Finaritra ry Mpamaky malala, “Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy...
AZA MENATRA NY HO VAVOLOMBELON’NY TOMPO
AZA MENATRA NY HO VAVOLOMBELON’NY TOMPO Ry Mpamaky malala , Amin’izao fiainana iainanao, izao moa tena sahy mijoro ho...
Editorial	Lire la suite
Ho anao izay miaritra fijaliana noho ny amin’ny Tompo indrindra izao teny izao. Mampahery anao ny Tompo mba haharitra tsara na dia...
Editorial, Education, Soratra Masina ... , Vaovao	Lire la suite
VAVOLOMBELON’NY TOMPO NY IRANY
Ho aminao hatrany anie ny fahasoavan’ny Tompo. Fomban’Andriamanitra ny maniraka olona hampitondrainy ny hafatra izay tiany...